Ebe igwu mmiri na dolphins na Spain | Akụkọ njem
Mariela Carril | 06/01/2022 17:00 | Emelitere ka 19/12/2021 15:03 | Atụmatụ, España
na dolphins ha mara mma ma mara oke mma. Ha bụ mammals mmiri, cetaceans, na enwere ụdị 34. Ị maara? Ahụrụ m ha n'anya, mana echere m na ha bụ anụmanụ yana na ị ga-ahapụ ha naanị ya, yabụ aghọtaghị m n'ezie agụụ njem nlegharị anya ndị mmadụ na ha na-emekọ ihe ...
Mana nke ọma, ajụjụ bụ mgbe ahụ, Ị nwere ike iji dolphins na-egwu mmiri na Spain? Na ntọala, ọ dịghị. Ndị otu gburugburu ekwenyela ya, mana ka enwere ebe ole na ole ị nwere ike ịhụ ha nso. Ka anyị mara ntakịrị gbasara isiokwu a.
Jiri dolphins gwuo mmiri na Spain
Dị ka anyị kwuru, ọ bụ nnọọ ike igwu mmiri na dolphins na Spain n'ihi na amachibidoro. N'agbanyeghị nke ahụ, e nwere ọtụtụ ebe ee enwere ihe ngosi dolphin na ọ bụrụgodị na ọ bụ ị nwere ike ịnọ nso, dịka ọmụmaatụ na Zoo Madrid ma ọ bụ Barcelona Zoo.
Ka gị na ha na-emekọrịta ihe, ị ga-agarịrị Benidorm, ruo Mundomar. Ebe a bụ Otu n'ime dolphinarium kacha mma na Europe, na ọ bụghị naanị dolphins kamakwa anụmanụ mmiri ndị ọzọ dị ka nduru, oké osimiri ọdụm, otters, flamingos ... Enwere ụdị 80 na mkpokọta na ọ bụkwa ebe ị nwere ike na-eme ihe. ọgwụgwọ dolphin.
Na Mundomar ihe a na-enye bụ ọkara awa nzukọ na dolphins, mgbe niile na ọnụnọ nke ndị na-eche nche ma ọ bụ ndị na-enye ọzụzụ na-akụziri ọha na eze akụkụ kachasị mma nke anụmanụ ndị a mara mma. Iso ụmụaka gaa bụ nnukwu atụmatụ. Oge ahụ na-ewe 30 nkeji ma na-agụnye nzukọ na ụmụ anụmanụ, foto abụọ nke ga-echeta ruo mgbe ebighị ebi kọntaktị, a onyinye towel, a azu paaki na obere karama ịnweta mmiri.
Lee Ọ bụ ihe amamihe dị na ya ime ndoputa ahụ nke ọma tupu oge eruo, ma ọ dịkarịa ala otu izu, site na ụlọ ahịa dị n'ịntanetị ma ọ bụ site na izipu email na mundomar@mundomar.es na-egosi aha, aha nna, nọmba ekwentị mkpanaaka, ọnụ ọgụgụ ụmụaka na ndị okenye na oge mmasị (nke nwere ike ịbụ na 12 ma ọ bụ 16 pm) .
Ị nwekwara ike ịkpọ site na ekwentị, ozi niile dị na webụsaịtị. Gịnị ee ị kwesịrị ịma ka igwu mmiri ma ghara inwe nkwarụ uche, ọ bụghị ime ime ma ọ bụrụ na ị bụ nwata na ị dị n'agbata afọ 5 na 12 ma ị nweghị ike igwu mmiri, okenye ga-eso ya. Ụdị ọrụ a na-eme n'etiti March na December, kwa ụbọchị, na ọnụ ahịa bụ 80 euro kwa okenye na 55 kwa nwa.
Ebe ọzọ na Spen na-ezute dolphin na Catalonia bụ Aquopolis. Ebe a dị na Costa Dorada, na La Pineda, na nso Salou na ọ mara mma ogige mmiri. Ị nwere kọntaktị na dolphins site na a njegharị eduzi, na okwu mmụta na obere mkparịta ụka nke na-enye ohere ka a na-emetụ ụmụ anụmanụ aka, mgbe niile n'okpuru anya ndị na-eche nche.
N'ụzọ doro anya, ị nwere ike ịse foto. Taa ọnụ ahịa bụ 74 euro kwa okenye na otu nwa. Ụmụaka ga-abụrịrị afọ asaa ma ọ dịkarịa ala 1, 15 mita n'ogologo. Ndị nọ n'agbata afọ 7 na 10 ga-esonyere onye toro eto na-esonyekwa na nzukọ ahụ.
Na Obodo Valencian ị nwekwara ike izute dolphin. Ebee? Na Oceanogràfic nke Valencia ya na Passport Animalia. Ọ bụghị naanị na ị ga-enwe ike izute dolphins kamakwa oké osimiri ọdụm ma mụta ihe niile gbasara ndụ anụmanụ ndị a dị egwu. Ma ị ga-ese foto ncheta. Kedu ụgwọ ọrụ maka ọrụ a? € 44,70 kwa okenye na € 37 kwa nwa.
Iji hụ dolphins nke Valencia, ụmụaka ga-abụrịrị afọ isii ma ọ bụrụ na ha dị n'agbata isii na iri na abụọ, ha ga-esokwa okenye. Ihe na-adọrọ mmasị ebe a bụ na ọ bụrụ na ị nwere mmasị na ọrụ ndị nlekọta, ị nwere ike ịghọ otu n'ime ha maka otu ụbọchị. Ee, Ị nwere ike ịbụ onye nkuzi otu ụbọchị wee mụta otú ha si elekọta ụmụ anụmanụ. Ihe mgbakwunye: a na-enye ahụmịhe nke ịrahụ ụra na shark maka euro 90.
El Delfinarium Selwo Marina dị na Malaga, n'ime obodo Benalmádena. N'ebe a, dolphinarium nwere ụzọ ụzọ mmiri dị n'okpuru mmiri, nke nwere ọkara, ka i wee nwee ike ịghọta ụmụ anụmanụ site na ntakịrị ntakịrị. A haziri egwuregwu ma ị nwere ike ịse foto ma metụ dolphins aka mgbe emechara ihe omume ndị ahụ. Ọnụego nwata ọ bụla bụ euro 39 na onye okenye bụ euro 74, dabere na oge ị na-aga.
Opekempe afọ ị ga-enweta ahụmahụ a na Malaga bụ afọ 5 maka ụmụaka, na ee, ọ bụrụ na ha dị n'agbata 5 na 7, ha ga-anọrịrị n'aka okenye. Ma ọ bụ na ha enweghị ike tụọ ihe na-erughị 1,25 mita n'ịdị elu ma ọ bụrụ otú ahụ, yana onye okenye na-esote ha.
Ndị a bụ ebe enwere ike ịmekọrịta dolphins na Spain. Rịba ama na anaghị m ekwu igwu mmiri n'ihi na dịka anyị kwuru na mmalite na amachibidoro ọrụ na mba ahụ. Ọ bụ gbasara imekọrịta ihe, ịbịaru nso, imetụ ha aka, na ọ bụghị ọtụtụ ihe ọzọ..
N'èzí Spain, ọ bụ ezie na ọ dị nso, ị nwere ike ime ntakịrị ihe na Portugal, na Zoomarine. Lee ee ị nwere ike igwu mmiri Ọfọn, ị nwere ike ịbanye n'ime nnukwu ọdọ mmiri nke osisi na ájá ọcha gbara ya gburugburu. Ọ dị oke ọnụ ma ọ bara uru: ọ na-efu euro 125, dabere na oge.
Mana ọ nweghị ebe ọzọ na Spain n'ezie? Ọfọn, ị nwere ike ịga n'ụsọ oké osimiri Atlantic wee debanye aha maka njem na-enye gị ohere ịga hụ ha n'ebe obibi ha., Ee n'ezie. Enwere njem nlegharị anya nke ụdị a na Canary Islands, dịka ọmụmaatụ, mana ọ ka bụ iwu na-akwadoghị ka igwu mmiri na ibe gị.
Nke bụ eziokwu bụ na ọ dị m ka ọ zuru oke na ị nweghị ike iji dolphin na-egwu mmiri. Nke ahụ ime ka ụmụ anụmanụ napụ ha nnwere onwe yiri m ihe na-atụ egwu, nke e mere na narị afọ nke XNUMX, ọ́ bụghị ya? Olee mkpa ọ dị taa iji nọgide na-enwe ụdị ebe ndị a mgbe ị nwere ike ịga njem ma ọ bụ kirie ya na TV ma ọ bụ Intanet? Ee, amaara m, igwu mmiri na dolphins aghaghị ịbụ ihe magburu onwe ya na ahụmahụ a na-agaghị echefu echefu, mana ọ bara uru imesi anụmanụ ndị a ike, na-amaja ha n'ụgbọ mmiri jupụtara na ndị njem nleta ma ọ bụ kpochie ha na dolphinariums ka ndị mmadụ nwee ike imetụ ha aka wee see foto ha?
Ọ bụrụ na agbanyeghị ọrụ ahụ masịrị gị, ndụmọdụ m bụ nke ahụ lee anya mmiri ma ọ bụ igwu mmiri n'etiti dolphins n'ime ọhịa. Ime ya na anụmanụ ndị nweere onwe ya bụ ihe magburu onwe ya ma dị nnọọ iche na mmekọrịta ya na anụ ahụ kpuchiri ekpuchi, n'ihi na nke a na-akwalite ịchụ nta.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Getaways Europe » España » Ebe ị ga-eji dolphins gwuo mmiri na Spain